I-Gigabit Switch - iSearch
NgoLwesine, ngoMeyi 28, 2020
Qala electronics Computer I-Gigabit Switch
Ngosizo lwe- I-Gigabit Switch ingahlinzekwa ukuxhumana okuhle kakhulu kwamadivaysi aphikisiwe. Kuze kube yi-gigabit ngomzuzwana isekelwa njengokuhamba ngesivinini ngasinye futhi isivinini sokudlulisa ngokushesha sivunyelwe. Kuye ngenani lamadivayisi okuzoxhunyaniswa, kukhona ukushintshwa kwe-4 kuya kumachwebeni we-48 nokuningi. Ngokuvamile amamodeli aklanyelwe njengamadivaysi aphezulu etafuleni bese atholakala yonke indawo. Kukhona namanye amadivaysi njenge I-Gigabit Switch, ezifakwe kwikhabhinethi yeseva. Amadivayisi wezobuchwepheshe angabuye ahlelwe ngokuvumelana nezimo futhi ukudalulwa kwamanethiwekhi amanethiwekhi ahlukene kuvunyelwe. Kukhona kakade ukukhethwa okukhulu kwezitshalo ezitholakalayo namuhla futhi wonke umuntu angakhetha imodeli efanelekayo.
Kuyafaneleka I-Gigabit Switch buy
Izoba okufanele kakhulu I-Gigabit Switch ke kukhona ezinye izinto okufanele uzicabangele. Kubalulekile, yebo, kubalulekile ukuthi ikhwalithi enhle ithengwe. Abaningi kakhulu abathengi abathengi bakhetha ukusebenzisa imikhiqizo eyaziwayo. Ngisho noma abakhiqizi abaziwayo bavame ukubiza kakhulu, ngakho-ke ulwazi nolwazi oluhambisanayo luvame ukunikezwa. Esikhathini esidlule, ama-hubs asetshenziselwa ukwakha uxhumano lwenethiwekhi, futhi namuhla imisebenzi yenziwa kakhulu yi- Ukushintsha kwe-Gigabit yokutholwa. le I-Gigabit Switch kunenzuzo, yebo, ukuthi lokhu kuhlakaniphile. Ngakho-ke amamodeli angakwazi ukukhomba ukuthi yikuphi ukuphela okukhiphayo okuholela ekuhambeni, kufanele kube khona imininingwane. Uma ngabe ihabhu lisetshenzisiwe, ke idatha idluliselwa kuzo zonke iziphumo futhi ngaleyo ndlela ithrafikhi ingasebenzi kahle. Mayelana nalokho I-Gigabit Switch amadivaysi enethiwekhi, amaphrinta, amaseva nama-PC angaxhunyiwe. Amadivayisi angasebenza kumanethiwekhi, ngaleyo ndlela enethiwekhi yasendlini nakwazo ezisetshenziswa emahhovisi. Ngokuba i-Daheim ivame ukuhamba kancane futhi lokhu sekungabizi eshibhile ukuthenga futhi kunikezwa inethiwekhi, esebenza kahle.
Kuyini ekuthengeni kwe I-Gigabit Switch ukucabangela?
Ngokuyinhloko i I-Gigabit Switch ngobukhulu obuhlukahlukene. Ukushintsha kungaba phakathi kwe-2 ne-50 amarekhodi futhi lokhu kuncike kulokho okudingekayo kuhlelo lokusebenza. Kubalulekile lapho ukuthenga ukuthi noma yimuphi isikhala singanwetshwa. Kufanele kube ku- I-Gigabit Switch Amachweba onke ahlale ekhululekile ngoba avame ukudingwa ngesikhathi esilandelayo. Kumabhizinisi amakhulu, ukushintshwa kusetshenziselwa isivinini se-uplink, esifike ku-100 gigabit. Ngoba uhlelo lokusebenza ekhaya luvame ukutholwa amamodeli amancane futhi lapha nge-100 Mbit bese ku-Fast Ethernet. Kusuka ku I-Gigabit Switch isivinini siyatholakala ngokuzenzakalelayo. Kungabuye kutholakale ukuthi ingumkhiqizo lapho ukunikezwa kwamandla kulawulwa nge-PoE, ikhamera yokubhekwa, ucingo lwe-IP noma enye idivayisi. Okunye okubalulekile ukuthengwa njalo umthamo we-backplane. Kumele kube okungenani phezulu, njengama-port wonke i-throughput evamile. Isikhathi esiningi I-Gigabit Switch ekwazi ukudlulisela izigidi zamaphakethe ngomzuzwana kuya ku-1,6. Into ebalulekile ukuthi amaphakethe amancane angakwazi ukucubungulwa kalula kunamakhulu amakhulu. Kusuka kwedatha yomkhiqizi, ngakho-ke kunzima kakhulu ukuqaphela amamodeli athile amaphakheji amakhulu.
Finyelela kumaseva ngejubane le-gigabit
a I-Gigabit Switch ihlale idlala indima ebaluleke kakhulu, uma iseva enejubane le-gigabit izosetshenziselwa kusuka ku-PC. Amamodeli ahlakaniphile afanelekile kulawa mahlelo. Ngaphezu kwejubane eliphezulu linikeza le I-Gigabit Switch Yebo ezinye izinzuzo eziningi. Ngokuvamile lokhu kufaka ashukumisayo ikheli le-IP, le Webkonfigurationsoberfläche ihlanganiswe, kungenzeka ukuphathwa akude nge SNMP namaphakethe iyahanjiswa ngokusebenzisa yomemukeli echwebeni ezifanele. Ukusetha kabusha izinkinobho kungabuye ibe isici esisebenzayo. Ngosizo lwesihluthulelo ukuqala kabusha kubangelwa futhi ngokuqhubekayo kungaba ne- I-Gigabit Switch izilungiselelo zefektri. Amanye amamodeli nawo afakwe amachweba, angasetshenziselwa ukuxhumana kwe-fiber njengamachwebeni e-SFP. Ngokuvamile amamodeli amancane aphuma ngaphandle kohlobo lwawo futhi ngaleyo ndlela ukusebenza akuthuli. Ingabe kukhona okukhudlwana I-Gigabit Switch umshayeli, khona-ke umsindo ogijima ngokuvamile ungabhekwa njengokuphazamisa. Nge-Cut Through Technology i-dataput esebenzayo ephezulu ifinyelelwe futhi ngisho namadivayisi wekilasi lentengo ephakathi lokhu sekuvele kutholakala namhlanje. Kuvame ukuphakanyiswa ukuthi ku I-Gigabit Switch njengedivaysi ephakeme kakhulu enobuchwepheshe isetshenziswa. Amadivayisi kufanele abe amaphutha, ngakho amaphakethe angalungile awadluliswanga.
Ngokuvamile incazelo yemodeli isiqaphele kakade izakhiwo ze- I-Gigabit Switch kukhona. Uma igama le-48G ligama, lokhu kusho, isibonelo, ukuthi iziphathimandla ze-48 zamukela amachweba I-Gigabit Switch kukhona. Ingabe kukhona ekupheleni igama P ke Poe isekelwa futhi phezu ikhebuli ye-Ethernet ikhamera ukubhekwa ngamandla isibonelo, lingatholakala enikeziwe. I-SFB iyaqaphela ukuthi i I-Gigabit Switch ibuye yenzelwe i-glass fiber connection. Esigodini, i-port ngayinye ye-SFB ingabuye ixhumane noshintsho oluthile, uma luyi-stackable. Uma izintandokazi ezinkulu zisetshenziselwa izinkampani, ukusetshenziswa kwamandla kudlala indima ebalulekile lapho uthenga. Uma imikhiqizo yenethiwekhi ine-IEEE ejwayelekile i-802.3az, khona-ke ugesi lungagcinwa futhi lunamandla. Uma amadivaysi anemisebenzi yamanje epholile ahle kakhulu, ngakho-ke I-Gigabit Switch futhi ngokuvamile ilayini eluhlaza noma i-Green Ethernet njengegama. le I-Gigabit Switch kunoma yikuphi indlela enhle neyakhayo yokudala amanethiwekhi endaweni efanele noma ekhaya. Amadivayisi angahlonywa ngezici ezahlukene zokusebenza noma ngobukhulu obuhlukile. Amadivayisi amaningi anikeza imisebenzi ehlakaniphile ukwenza inethiwekhi iphumelele. a I-Gigabit Switch yisisombululo esihle kunazo zonke amaphakheji yedatha njengeziteshi zokusabalalisa. Amaports amaningi angakhethwa njengoba kudingeka kule sicelo. Kuhle kakhulu ukusebenzisa le I-Gigabit Switch kodwa njalo lapho uthenga ngesikhatsi esizayo. Kungcono ukushiya amachweba owodwa noma amabili mahhala, ukuze amadivaysi angeziwe angene kwinethiwekhi esikhathini esizayo. Akekho ofuna entsha I-Gigabit Switch ukuthenga. Kunconywa kakhulu lapho amadivaysi aphezulu athengwa, ngoba lawo ahlukaniswa ngedatha ephakeme yedatha kanye nejubane eliphezulu.
Ulwazi olubalulekile mayelana ne I-Gigabit Switch
Ngenethiwekhi, i Ishintsha isici esiphakathi. Kukhona amadivayisi we-Gigabit amanethiwekhi omkhaya, amafemu omthetho, amahhovisi odokotela noma izinkampani. Ngaphandle Shintsha ukuxhumeka kwenethiwekhi yamadivaysi enethiwekhi, amaphrinta, amaseva nama-PC akwenzeki. Kubalulekile ngokuhle I-Gigabit Switch kungukuthi ukusetshenziswa kwamanje kuyinto ephansi ngangokunokwenzeka kanti noma kunjalo i-passput ephezulu yedatha iyiswa. le Shintsha uyisihlobo esihlakaniphile esithombeni. Ngenxa yezizathu zokubiza, basebenzisa iminyaka embalwa edlule, kodwa okwamanje nje kuphela Ishintsha kukhiqizwa. Kuleso simo, ngokuhlakanipha kusho lokho I-Gigabit Switch uyazi kahle ukuthi yiziphi amadivayisi axhunyiwe echwebeni namaphakethe athunyelwa emachwebeni ngokuqondile. Kusuka kubhulogi, amaphakethe amane aphindaphindiwe kuwo wonke amachweba, abangela ukuthungatha kwenethiwekhi engadingekile. Ngokwebhandi, i-passput enkulu ishiwo ngabakhiqizi njengomkhiqizo wenani lamaports ane-GBit. I-switch ye-port yesishiyagalombili inikeza i-16 GBit njenge-backplane ngokusebenzisa. Nge-Gigabit Ethernet port the Shintsha mayelana namaphakethe we-1,6 million ngomzuzwana owodwa. Noma kunjalo, amancane amaphakheji angaphansi, umzamo ongezantsi. Inani lomkhiqizi akudingeki ukuthi lisho into efana ne Shintsha bese ubheka iphakheji enkulu. Ubuchwepheshe be-Cut-Throuth buzibonakalise ngokwama-latencies aphansi okwenziwe nge-dataput ephezulu futhi sekuyisikhathi eside kuphakathi kwamanani entengo. Kodwa-ke, ukungahambi kahle ukuthi amaphakethe angalungile nawo angathunyelwa ngoba isheke se-CRC noma isheke lokubuyiswa kungenzeka kuphela ngemuva kokuthola lonke iphakheji yedatha. Amamodeli wekhwalithi eliphezulu ahlinzeka ngokuguquguquka okuguquguqukayo okuthiwa indlela noma ukuphulwa okungafani.
Akukho mavoti okwamanje.
Ukuvota okwamanje kukhutshaziwe, ukugcinwa kwedatha kuyaqhubeka.
Isihloko sangaphambiliniithebula Ukushintsha heater ekhazimulayo
Isihloko esilandelayoIbhuloho lamazinyo kagesi
IZIHLOKO EZIFUNDWAYOOKWENGEZIWE KUMPHATHI
Okthoba 13, 2018